Wasiirka Maaliyaddu Muxuu Ka Yidhi Sharciyadda Lacagta Lambnarada Cusub Ee Ee Gaadiid Uu Ku Dallacay? | Berberatoday.com
Wasiirka Maaliyaddu Muxuu Ka Yidhi Sharciyadda Lacagta Lambnarada Cusub Ee Ee Gaadiid Uu Ku Dallacay?
Hargeysa(Berberatoday.com)-Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda Somaliland Yuusuf Maxamed Cabdi, ayaa difaacay Wareegto Lacag Lix Boqol oo Kun oo Shilinka dalka ah iyo ka badan ku soo rogaysa Gaadiidka Afarta Taayir leh iyo noocyada kale, taasoo uu ku sheegay in loogu beddelayo Taarikada ama Bilaydh-lambarka Baabuurta hore looga iibiyey, iyada oo ay Dadweynaha iyo Xisbiyada Mucaaradka ahiba ku tilmaameen mid Sharci-darro iyo caqli-darro ah.
Haddaba, Wasiirka Horumarinta Maaliyadda oo Nuqul ka mid ah War-Saxaafadeed uu soo saaray oo caawa Nuqul ka mid ahi soo gaadhay Warbaahinta Aftahannews.com, waxa uu ku sheegay inay Wasaaraddiisu xaq u leedahay inay beddeli karto Taarikada Gaadiidka, isla markaana ay Sharciga dalka u eegeen, sidoo kalena ka soo xigteen dalalka Caalamka qaarkood. Hase-yeeshee, Xisbiyada Mucaaradka ah ee UCID iyo Waddani Masuuliyiin ka tirsan oo Sabtidii Maanta Warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa, ayaa Bulshada ugu Baaqay inaanay Bixin lacagtaas oo ay sheegeen inay sharciyan xaaraan tahay, isla markaana ay caqliyadda saxda ah ka fogtay, sida ay ku doodeen.
War-saxaafadeedkaas oo uu ku saxeexnaa Wasiir Yuusuf Maxamed Cabdi, dooddiisa iyo nuxurka uu sidaaba, waxa uu u dhignaa sidatan:- “Waxa jirta in warqadda summadeedu tahay WM/02/08-01/1480/2018 kuna taariikhaysan 13/09/2018 ujeedadeeduna ay ahayd wax-ka-bedelka tacriifadda lambarrada cusub ee gaadiidka, taas oo lagu baahiyay baraha bulshadu ku kulanto iyo warbaahinta fogaan-aragga ah ee dalka.
Xeerka Waddo-marista Gaadiidka;
Xeerka iyo Qodobada Dastuurka ee u Ogolaanaya Wasaaradda H/Maaliyadda ee u ogolaanaya kordhinta Qiimaha (Value) Bilaydhka Gaadiidka. Wasaaradda Horumarinta Maaliyaddu waxay awood u leedahay wax-ka-bedelka qiimaha tacriifadda ee ah dhokumenti kasta oo u taagan lacag sida bilaydh-lambarka. Waxaana u ogolaaday awooddaa Xeerka Cashuuraha Berriga ee ay summadiisu tahay 72/2016 qodobkiisa 52aad kaas oo ka hadlaya wax-ka-beddelka Shaxda iyo Xaddiga Lacagta.
Qodobkani kama hor imanayo Dastuurka qodobkiisa 14aad, waayo isla qodobkaa 14aad faqraddiisa 2aad waxay sheegaysaa in uu xeer kale jidaynayo curinta, dhaafidda iyo wax-ka-bedelka cashuuraha. Xeerkaa kale ee jidaynayaana waa xeerka Cashuuraha Berriga Xeer Lr. 72/2016 qodobkiisa 52 aad, kaas oo sheegaya:- “Wasiirku ka dib marka uu helo ansixinta Baarlamaanka wuxuu si sharci ah wax ka badali karaa;
b) Qadar kasta oo lacageed oo lagu qeexay xeerkan ama t) Jaantuuska;
Mudada ay qaadanayso badalaadda baleedhada Gaadiidka;
Soo Bandhigidda Xaddiga Cashuurta ay ka Qaadaan
Dalalka Jaarkeenna ah Bileedhada Gaadiidka
a) Dalka Itoobiya ee aynu jaarka nahay waxa la cashuuraa isaga 2% ka mid ah qiimaha uu gaadhigu taagan yahay taas oo laga shubo lacag kumaan-kun dollar ah qofka gaadhiga leh.
b) Kiiniya waa 300 oo Dollar,
c) Jabuuti $ 200,
d) Eletariya $130,
e) Somalia $ 160,
Maadaama oo uu hal-ku-dhegga dawladani yahay sarraynta sharciga, Wasaaradda Horumarinta Maaliyaddu waxay fulisay dhammaan shuruucda dalka ee uu jideeyay baarlamaanku. Waxa muhiim ah in ay shacabku ogaadaan in aanay wasaaraddu jabinin shuruucda u yaalla dalka, isla markaana ay mar walba ku dedaalayso sidii uu dalku u horumari lahaa.
Fulinta xeerarkii ay sameeyeen baarlamaanka, dawlad nidaamsan oo daahrufan iyo isla xisaabtan joogto ahi waa mid ka mid ah astaamaha ay dawladani leedahay. Shacab-weynaha Somaliland na waxan ka codsanaynaa in ay dawladda la dhinac istaagaan fulinta iyo sarraynta sharciga.
Waxaa xusid mudan in samaynta bileedhada gaadiidka sida ugu dhakhsaha badan leh lagu soo wareejin doona gacanta dawladda, isla markaana ay daabici doonto madbacadda qaranku.
waxaanay gacanta dawladda ka maqnaan doontaa oo qudha inta lagu wado casriyaynta iyo dalbida mashiinadda lagu daabacayo bileedhada, sidoo kale la diyaarinayo shaqaalihii hanan lahaa hawshan oo xirfadooda iyo aqoontoodana kor loo qaadayo. Allaa Mahad Leh.”
Halkan Hoose ka Daawo Muuqaal-Dhegaysiga War-Saxaafadeedkan Wasiirka Horumarinta Maaliyadda;-